China Glass Bottle IV Isisombululo Line Production abenzi kunye nabathengisi | IVEN
Umgca weMveliso yoSombululo se-IV -Ibhotile yeglasi ye-LVP
Umgca wemveliso yesisombululo seglasi IV usetyenziselwa ikakhulu isisombululo se-IV ngebhotile yeglasi ye-50-500ml yokuhlamba, i-depyrogenation, ukugcwalisa kunye nokumisa, ukwenza into. Ingasetyenziselwa ukuveliswa kweswekile, isibulala-zintsholongwane, i-amino acid, i-emulsion enamafutha, isisombululo sezondlo kunye neearhente zebhayiloji kunye nolunye ulwelo njl.
Imeshini yovasa Impahla:
Lo matshini usetyenziselwa ukuhlanjwa okuhle kwibhotile yeglasi yokumnika, ngokutshintshana ukusebenzisa amanzi aqhelekileyo, amanzi acocekileyo, amanzi enaliti, umoya ococekileyo ocoliweyo, amanzi enaliti entsha kunye nomoya ococekileyo ocociweyo wokuhlamba ibhotile.
I-laminar flow sterilization tunnel esetyenziselwa ukucoca i-vial's dry sterisization kwaye isuse ubushushu, inokufikelela kubushushu obuphezulu be-300 ～ 350 ℃, ixesha elifanelekileyo lokucoca imizuzu emi-5-10.
Inendawo yokusebenza ezintathu (indawo yePreheat, indawo yokufudumeza, indawo yokupholisa).
Ukuzalisa, Ukucoca, iNitrogen Ukutshaja, umatshini wokumisa
Ukuzalisa icandelo lamkela ukuzaliswa kwevalve ye-GEMU yaseJamani, ngokuchaneka okuphezulu.
Ukutshaja kwe-nitrojeni ngoko nangoko emva kokugcwaliswa, kunye nokukhuselwa kwe-nitrogen phakathi kokutshaja kwe-nitrogen kunye nokumisa.
Akukho zibhotile azizaliswanga, akukho bhotile ayisebenzi, akukho bhotile ayibizi nitrojeni, qinisekisa inqanaba lokucoca itanki lomoya ngexesha lokucoca, okwangoku, qiniseka ukuba intsalela yeoksijini emva kokumisa (ulawulo ngaphakathi kwe-1.0%).
Ukuzalisa kunye noMatshini wokumisa
Umatshini wokugcwalisa ulwelo we-Aseptic uchanekile kwaye uzinzile ukusebenza. Umthamo wokugcwalisa unokuhlengahlengiswa ngokuthe ngqo nge-HMI, apha sinee-ORABS ezixhotyiswe ngentsimbi engenamatshini yentsimbi yokuhamba komoya.
Isetyenziselwa ikakhulu iibhotile zeglasi. Umsebenzi oqhubekayo. Ukuchola kunye nokukrala, ngaxeshanye uqengqa ikepusi. Emva kokugqitywa, ikepusi zinobungakanani obufanayo kunye nomphetho ogudileyo, ukubonakala okuhle. Isantya esiphezulu, ukonakala okuphantsi.
Umbhobho owahlukileyo wokucoca phakathi, akukho nxamnye nongcoliseko, ngokweemfuno ze-GMP.
Ukugcwalisa intloko ngokungqinelanayo kulandelela ukuzaliswa, ukuchaneka kokugcwalisa okuphezulu.
3.Adopt inkqubo servo drive ngokupheleleyo, akukho transmission ngoomatshini.
Umsebenzi wokutshaja we-nitrogen ungaqwalaselwa (ngaphambi kokugcwaliswa, ngexesha lokugcwaliswa, emva kokugcwaliswa).
5.Quick utshintsho ixesha ngokobungakanani beebhotile ezahlukeneyo.
Ukuzalisa, iNitrogen Ukutshaja, umatshini wokumisa
CNGF161 / 10
CNGF07 / 10 CNGF-36/20 CNGF687 / 20
Imveliso amandla 60-100BPM 100-150BPM 150-300BPM 300-400BPM
Ubungakanani bebhotile esetyenzisiweyo 50ml, 100ml, 250ml, 500ml
Ukuzalisa ukuchaneka ± 1.5%
Uxinzelelo lomoya (m³ / h) 0.6Mpa 1.5 3 4 4.5
Ukunikezwa Amandla KW 4 4 6 6
Ubunzima T 7.5 11 13.5 14
Ubungakanani boomatshini (L × W × H) (MM) 2500 * 1250 * 2350 2500 * 1520 * 2350 3150 * 1900 * 2350
Egqithileyo Umzi mveliso unikezela ngokuthe ngqo kumatshini wokugcwalisa umatshini weAmpoule-Umatshini wokugcwalisa iCartridge-IVEN
Okulandelayo: Umatshini weSirinji ozalisiweyo (kubandakanya isitofu sokugonya)
Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca, Umatshini ozalisiweyo-weSirinji, Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina, Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer, Umatshini weAmpoule À iCoudre Led, Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo,